Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Denmark na -agbasa akụkọ » Denmark mechiri mgbochi COVID-19 niile na Septemba 10
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Denmark na -agbasa akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Nhazi ọkwa COVID-19 nke ga-akwụsị n'oge na-adịghị anya dị ka ihe iyi egwu ọha na eze kwere ka ndị ọchịchị Denmark manye mmachi dị ka ihe mkpuchi dị mkpa na mkpuchi 'coronapass', yana machibido nnọkọ oriri na mba.
Denmark kwụsịrị ịkọwa nje ahụ dị ka "ọrịa mmekọrịta ọha na eze".
Denmark ga-ebuli mmachi niile metụtara ọrịa na Septemba.
Nsonaazụ dị mma bụ nsonaazụ nke “njikwa njikwa ọrịa siri ike”.
Ndị ọrụ ahụike Denmark wepụtara nkwupụta taa na-ekwupụta na ha emeela mkpebi ịkwụsị ịkọwa COVID-19 dị ka "ọrịa mmekọrịta ọha na eze," ebe ọ bụ na ha na-achịkwa ya. Mkpebi ahụ pụtara na ntọala iwu ọ bụla maka mmachi metụtara ọrịa na-akwụsị ịdị adị ya mere a ga-ebuli mmachi niile na Septemba 10.
Nkwupụta ahụ kwuru, "A na -achịkwa ọrịa a, anyị nwere ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi dị elu."
Ọ bụ ezie na nsonaazụ dị mma bụ nsonaazụ nke “nchịkwa nchịkwa ọrịa siri ike,” iwu pụrụ iche ewepụtara na ya Denmark ịlụso nje na -egbu egbu ọgụ agaghị adịkwa malite na Septemba 10, ka ọkwa gọọmentị siri kwuo.
Nhazi ọkwa na nso nso a nke COVID-19 dị ka ihe iyi egwu ọha na-ekwe ka ndị ọchịchị manye mmachi dị ka ihe mkpuchi dị mkpa na ihe mkpuchi 'coronapass', yana machibido nnọkọ oriri na ọ Denmarkụ Denmarkụ.
Nkwupụta ahụ kwuru, "Gọọmentị ekwela nkwa na anyị agaghị ejigide usoro ndị ahụ ogologo oge karịa ka ọ dị mkpa, ebe ahụ ka anyị nọ ugbu a," na -agbakwụnye na agaghị enwe mkpa pụrụ iche ọbụlagodi maka nnukwu mmemme ọha, yana n'ihe gbasara ịnweta ohere obodo. ndụ abalị. Agbanyeghị, ndị ọchịchị debere ikike ịkwado ihe mgbochi metụtara COVID "ma ọ bụrụ na oria ojoo a na-eyi egwu ọrụ dị mkpa n'ime ọha."
"Ọrụ ike agwụbeghị, ilele ụwa ga -egosi ihe kpatara anyị ga -eji nọrọ na nche." Minista ahụike Denmark Magnus Heunicke dere na Twitter, ebe ọ na -etokwa “njikwa ọrịa” nke obodo ya.
Denmark so na mba ndị mbụ butere mmachi metụtara ọrịa mgbe ụlọ omebe iwu ya tiri iwu onye isi na-ekewa ọrịa ahụ ka ọ na-eyi ọha egwu egwu na Machị 2020. Ewepụtara mkpọchi akụkụ ahụ laa azụ n'oge ahụ, yana iwu ọhụrụ mechara gbakwunye, zuru ike , na agbamume n'oge ọrịa a niile. Ka ọ na -erule ngwụsị Ọgọst, ihe karịrị 70% nke ndị obodo agbaala ọgwụ mgbochi ọ bụla. Denmark edebanyela aha ihe karịrị ọrịa 342,000, ebe ihe karịrị mmadụ 2,500 nwụrụ na ya.